Yazvino gadziriso yeGboard inotiunzira emojis nyowani uye kududzira kwezwi pakati pezvimwe zvitsva | IPhone nhau
Ivo vakomana vanobva kuGoogle vachangobva kuzivisa nyowani nyowani kukhibhodi yavo yeIOS, Gboard, keyboard iyo zvishoma nezvishoma yave imwe yeanonyanya kushandiswa nevashandisi veIOS nekuda kwenzvimbo dzainotipa. Google's Gboard inosanganisa kugona kwekutsvaga zvakananga kubva kunyorera kwatiri, kuwedzera kumaGIF, emojis uye nezvimwe. Yazvino gadziriso kuGboard ichangobva kuwedzera mitauro mitsva gumi neshanu, emojis nyowani, kuraira kwezwi uye Google Doodle kuti iwe ugone kunakidzwa nayo chero nguva pasina kushanyira injini yekutsvaga.
Chii chitsva muGboard vhezheni 1.3.0
Vakomana veGoogle ivo vangowedzera gumi nemashanu mitauro mitsva yakatsigirwa nekhibhodi inoyevedza kubva kuGoogle: chiCatalan, chiCzech, chiCroatia, chiDanish, chiLatin America chiSpanish, chiFinnish, chiGreek, chiDutch, chiHungary, chiMalay, chiPolish, chiRomania, chiRussian, chiSwedish neTurkey.
Chimwe chinhu chitsva icho chinovandudzwa chinotiunzira chine chekuita nekurairwa kwenzwi, iro tibvumire isu kugadzira zvirevo kana kutumira mameseji zvakananga zvisinei nezvatiri kuita, zvakanaka kune iyo nguva patisingakwanise kushandisa iyo keyboard.
Google Doodle iri kuuyawo kuGboard. Nenzira iyi tichakwanisa tarisa zvatsva kubva kuGoogle Doodle, MaDoodle aunoburitsa kuyeuka mazuva akasarudzika, mazororo, zviitiko, mazuva ekuberekwa kwevanhu vane mukurumbira. Kuti ubvunze iyo Doodle yezuva, isu tinongofanirwa kubaya pane G bhatani kana ratiratidza kadikidiki kadiki.
Mune ino gadziriso haikwanise kupotsa emojis nyowani eIOS 10, emojis iyo yatinogona kuigovana zvakananga kubva kumeseji application yeiyi vhezheni yeIOS, vhezheni yakanangana nekuvandudza zvakanyanya iyo application meseji kuyedza kukwikwidzana neanonyanya kushandiswa mameseji maapplication.
Gboard - iyo Google keyboardvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo yazvino Gboard yekuvandudza inounza isu nyowani emojis uye izwi kududzira pakati pezvimwe zvitsva
Ini handikwanise kuisa ino yazvino Gboard kugadzirisa… uye yarega kundishandira. Ndine yakagadziridzwa iPhone 6. Iyo yekuvandudza yapera uye inondiudza "hazvigoneke kurodha pasi app." Ndine nzvimbo ... Zvinoitika kune mumwe munhu?
RuvaraWave rinotibvumidza isu kugadzirisa iwo marara emaAirPod edu pakati pemarudzi makumi mashanu nemasere